January 2018 - Page 2 of 8 - Puntland Mirror Believable Media Website
Quantities of mortar shells captured in Bosaso
January 27, 2018 Puntland Mirror 0
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland security officials in Bosaso displayed quantities of mortar shells captured in raids took place in the port town over the past few weeks. The officials declined to comment more specific details on […]
January 27, 2018 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa taageertay howlgalka millatari ee uu Turkigu ka waddo gobolka Afrin ee kuyaala waqooyiga-galbeed ee dalka Suuriya, sida ay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu kasoo xigatay Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya. Axmed Ciise […]
Shaqaale ajnabi ah oo katirsanaa UNICEF oo Muqdisho lagu dilay
January 26, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal sare oo ajnabi ah oo la shaqeynayay haayada UNICEF xafiiskeeda magaalada Muqdisho ayaa galabta oo Jimce ah lagu dilay Muqdisho, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka. Dilka ayaa waxaa geystay nin Soomaali ah […]
Puntland Minister of Agriculture and Irrigation dies in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) Puntland Minister of Agriculture and Irrigation, Abdinur Elmi Mohamoud also known as Biindhe has died in Mogadishu this morning, where he had been receiving treatment for an undisclosed illness, his family said. Biindhe […]
Wasiirkii Beeraha iyo Waraabka Puntland oo ku geeriyooday Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirkii Beeraha iyo Waraabka Puntland Cabdinuur Cilmi Maxamuud oo loo yaqiin “Biindhe” ayaa saakay oo Jimce ah ku geeriyooday magaalada Muqdisho, halkaas oo uu daaweyn xanuun aan la sheegin u joogay, sida ay […]
January 25, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Cabdullaahi Shire Dool u magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada booliiska, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday maanta oo Khamiis ah. Digreetada, ayaa Madaxweyne Cabdiweli sidoo kale […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Abdiweli Mohamed Ali has appointed Abdullahi Shire Dool as the new police chief, according to presidential decree issued on Thursday. In the decree, President Ali also selected Bile Farah Ali as […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka digay in xiisada sii kordheysa ee u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ee ku saabsan gobolka Sool ay keeni karto rabshad. “Waxaa jira muran aad u […]
Garowe-(Puntland Mirror) UN representative for Somalia has warned that escalating tension between Puntland and Somaliland over Sool region could lead violence. “There is a serious danger that long-standing disputes between Puntland and Somaliland, and in […]
January 24, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dhawaan uu magacaabi doono guddi ka shaqeeya dabagalka fulinta mashaariicda horumarineed ee uu ka dhagax dhigay deegaannadii uu socdaalka kusoo maray dhawaan. Madaxweynaha […]
Diyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah oo burburtay
Moscow-(Puntland Mirror) Diyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa burburtay maanta oo Axad ah kadib markii ay kasoo muuqan weyday shaashadaha raadaarka, sida ay sheegeen warbixinadu. Diyaaradda ayaa [...]
Sakiya Xuseen oo noqotay haweenaydii ugu horeysay oo ciidamada ka gaarta “Sareeye Guuto”
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sakiya Xuseen ayaa loo xiray darajada Sareeye Guuto, iyada oo noqoneysa haweenaydii kowaad oo darajadaas ka gaarta taariikhda ciidamada Soomaaliyeed. Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa darajada u xiray haweenaydaas maanta [...]
Maxaabiis Soomaali ah oo laga sii daayay xabsiyo kuyaala Iran oo yimid magaalada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) In ka badan 20 maxaabiis Soomaali ah oo laga sii daayay xabsiyo kuyaala dalka Iran ayaa maanta oo Isniin ah yimid magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda. Masuuliyiin katirsan dowladda Puntland ayaa [...]